Ardor စျေး - အွန်လိုင်း ARDR ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Ardor (ARDR)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Ardor (ARDR) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Ardor ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $53 956 530.00
volume_24h_usd: $2 301 630.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Ardor တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Ardor များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
ArdorARDR သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0678ArdorARDR သို့ ယူရိုEUR€0.0575ArdorARDR သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0518ArdorARDR သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0618ArdorARDR သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.605ArdorARDR သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.428ArdorARDR သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč1.5ArdorARDR သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.253ArdorARDR သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0898ArdorARDR သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0949ArdorARDR သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$1.5ArdorARDR သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.526ArdorARDR သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.364ArdorARDR သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹5.08ArdorARDR သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.11.45ArdorARDR သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0931ArdorARDR သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.104ArdorARDR သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿2.11ArdorARDR သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.472ArdorARDR သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥7.24ArdorARDR သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩80.51ArdorARDR သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦26.2ArdorARDR သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽4.97ArdorARDR သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴1.85
ArdorARDR သို့ BitcoinBTC0.000006 ArdorARDR သို့ EthereumETH0.000177 ArdorARDR သို့ LitecoinLTC0.00125 ArdorARDR သို့ DigitalCashDASH0.000748 ArdorARDR သို့ MoneroXMR0.000762 ArdorARDR သို့ NxtNXT5.29 ArdorARDR သို့ Ethereum ClassicETC0.01 ArdorARDR သို့ DogecoinDOGE19.58 ArdorARDR သို့ ZCashZEC0.000824 ArdorARDR သို့ BitsharesBTS2.09 ArdorARDR သို့ DigiByteDGB2.17 ArdorARDR သို့ RippleXRP0.241 ArdorARDR သို့ BitcoinDarkBTCD0.00234 ArdorARDR သို့ PeerCoinPPC0.225 ArdorARDR သို့ CraigsCoinCRAIG30.92 ArdorARDR သို့ BitstakeXBS2.89 ArdorARDR သို့ PayCoinXPY1.18 ArdorARDR သို့ ProsperCoinPRC8.51 ArdorARDR သို့ YbCoinYBC0.00004 ArdorARDR သို့ DarkKushDANK21.78 ArdorARDR သို့ GiveCoinGIVE146.96 ArdorARDR သို့ KoboCoinKOBO15.46 ArdorARDR သို့ DarkTokenDT0.0625 ArdorARDR သို့ CETUS CoinCETI195.98